Mooraa diinaa beekuun, mooraa firaa eeguu dha!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMooraa diinaa beekuun, mooraa firaa eeguu dha!!
“Vidiyoo sa’aatii lama ‘kan miliqee bahe’ jedhamee haasaa Abiy Ahmed kaadirota waliin taasise tokko warri Ze Habasha facaasaa jiru. Dubbiin suni kan miliqee bahe osoo hintaane akkas jedhanii akka namni waliif dabarsuudhan dhaamsi sun nama biraa gahuuf waan yaadameef asirratti hinqoodne. Haata’u malee Warri Bilxiginnaa maal yaadaa jiru isa jedhu beekun gaaridha. Qabxiin ijoon inni haasaye tana:
1. EPRDF warri du’e jettena sobaa, isuma maqaa jijjiirree muuxachoifne jedhee fkn risaan waggaa afurtamatti akka itti muuxatu waliin ibse. Bilxiginnaan dhaaba haaraa mitii, EPRDF jedhee tolchee ibse.
2. Qeerroo (maqaa Waxatoch) jedhuun bakka saditti qoode- qeerroo nagaa, qeerroo jiddu galeessa, qeerroo booressitoota. Tana sirriitti jala muraa laalaa. Bilxiginnaan akkamitti akka qeerroo irratti xiyyeeffachaa jirtu.
3. Kaadiree 40 000 lenjifneerra jedhee jaratti haasa’a. Nama kuma afurtamni kuni mataa mataa nama 100 tokko amansiisa kanaan filannoo moo’anna jedha. Filannoo akka moo’annu nibeekna jedhe.
4. Haata’u malee warri mormitootaa yoo mo’an nama akka keessan Ganda, Aanaa, Godinabulchuudhan muuxannoo qabu kana ni ariina jedhu jedhee sodaachisa. Garuu immoo warri garee mormitoota kuni ganda takkallee bulchuudhaf muuxannoo hinqaban jedhee jala sarara. Waan dagate tokko garuu OPDO waggaa 30 ormaaf ergamuu male biyya bulchitee hinbeekne inuma biyya bulchite.
5. Ammallee haasa’a isaa keessatti sivil servant (ogeeyyii hojjetaniif) kaadiree adda baasee hinbeeku. Kaadiren hojii dhabuu malti, warri ogeeyyii garuu eenyumtuu yoo aangoo qabte inuma itti fufu. Fkn barsiisaa, hojjetaa fayyaa, ogeessa bulchiinsaa kkf. Bilxiginnaan garuu akka waan yoo isaan aangoo dhaban namni hojii irraa ari’amuu tokkotti ummata dorsisu.
6. Waayee ‘Maddemer’ kanuma duraan nu ifachiise irra deebi’aa oole. Haata’u malee garuu haasaa isaa keessatti Meddemer kuni kooppii Chaynaa irraa fudhatame ta’uu osoo hinbeekin ibse. Irra deddeebi’ee akkaataa Chaynaan ittiin guddatte hordofna jedhee mirkaneessee, fakkeenya isaanii kaase. Meddemer kooppii Chaynaa ta’uu ifaadha haasa’a isaa kanarraa.
7. TPLF waliin wal sossobaa turuu isaanitiif kan irratti waliif hingalinis warra duuba taa’ee isaan ajaju ofirraa hambisaa jennaan akka didan (warri biyya saame) haa hafu jennaan didanii jedha. Garuu Abiy mataan isaa jala deemtuu TPLF ta’uu xiqqoollee hinyaadatu.
8. Waggaa 10 fi waggaa shantamaaf akka sagantaa baafachaa jiran kaadirotaaf mirkaneessa. Akkuma duraan waggaa 50 bulchaa jedhe jedhamu san ammas waggaa 40 sagantaa baafachuu isaanii kaadirota amansiisuf yaala.
9. Ummattoota kibbaa lakkoofsa isaanii baay’atus xiqqaatus akka qixxee mirga qabanitti kaaya. Ummata bal’aa xiqqeesuf yaala. Kuni torbeewwan darbe kan inni saboota lakkoofsan xiqqaa waliin marii gochaa ture san maalif akka ta’e mulisa. Maal akka isaanin jechaa tures asitti ifa godhe.
10. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa (Mormor) laalchisee akka ala keessa dhaadatan kana osoo hintaane mirga bbolaa keenyaa eegnee fayyadamna jedha. Obbolaan Warra Misirii ta’uu isaati. Ummataan dhaadadhaa jedhani, keessa keessa garuu suuta suuta wal amansiisuf yaalu.” Via Asnake T Erko
Ethiopia: መረጃ – ሾልኮ የወጣው አነጋጋሪው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የ2 ሰዓት ቪድዮ እጃችን ገባ | PM Abiy Ahmed | Part 1 of 2